एमसिसी, संभावित संकट र हाम्रो नेतृत्व :ANZ Khabar
अक्ल्याण्डको समय: ०५:४७ |सिड्नीको समय: ०३:४७ |काठमाडौंको समय: २३:३२
एमसिसी, संभावित संकट र हाम्रो नेतृत्व
डिल्ली राज पाण्डेयसेप्टेम्बर १३, २०२१
दक्षिण अफ्रिकामा कुनै समय यस्तो पनि थियो जतिवेला कालाहरूलाई पटकपटक गोलीको निशाना बनाउने एउटा अपराधीले गोराहरूको अदालतमा सगर्व बयान दिँदै भन्थ्यो, “मैले कुनै अपराध गरेको छैन । मैले त गोली हान्ने अभ्यास मात्र गरेको हुँ ।”
नेपालमा युद्धका सरदारहरू आज कोही सत्तामा छन् त कोही बाहिर । जसको कलो खाएर नेपाली जनताको कंचटमा गोली दागिएको थियो तिनीहरूको दिमागमा पैसाको मान्यताबाहेक अरू केही रहेनछ भन्ने कुरा वर्तमानका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । समाजले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने व्यक्तिले नै समाजलाई ढाँट्छ भने त्यो व्यक्ति सबैभन्दा खराब हो । खराब ब्यक्तिले नै गलतलाई साथ दिइरहेको हुन्छ ।
केवल नाफा र नोक्सानको राजनीति भैरहेको छ । सकिन्छ शक्तिको पछाडि भाग, चाकडी गर, ताली र गालीमा भाग लेऊ । सकिँदैन चुप लाग अनि निष्पक्षताको वकालत गर । जब देश संकटमा पर्दछ त्यो वेला तटस्थताको वकालत गर्नेहरू सबैभन्दा अवसरवादी, लाछी र कायरहरू हुन् । हरेक तर्कले कर्मको अपेक्षा गर्दछ । निष्पक्षता जब ‘क्रसरोड’मा तमासे बन्दछ त्यसले बोक्ने मूल्य र आदर्श केवल नाफा या घाटामा परिणत हुन्छ । पैसाको मान्यतालाई आफ्नो दिमाखमा बोकेर हिड्नेहरूले राजनीति होइन ब्यापार गर्नुपर्छ ।
गधा धोएर गाई हुँदैन अनि भनिरहनु परोइन कुकुरको पुच्छर १२ बर्ष ढुंगामा राखेपनि बांगाको बांगै । तुइन काटेर एउटा नेपालीको हत्या गरिएको छ । पामर शासक जनताको मुखमा पट्टी बाँध्ने आदेश दिन्छ । दार्चुलाको नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर उड्छ सत्ताको कात्रो भिर्नेहरू चुँसम्म बोल्दैनन्, बरू हतारो छ एमसिसी पास गर्न । सिधा कुरा एमसिसी कार्यान्वयन होइन खारेज गर्नुपर्छ । सत्ता र पैसाको प्यास ५५ अरबको हड्डीमा –याल काढ्नुभन्दा अगाडि विज्ञहरूको सुझाव र सल्लाहमा लिएको भए आजको अवस्था नै आउने थिएन ।
“सवाल यो होइन कि तिमी कत्तिको सानो छौ । सवाल त यही नै हो कि सानै भए पनि आस्था, प्रतिबद्धता र कार्ययोजनाको शक्ति तिमीमा कत्तिको मात्रामा छ ।”
माथिका भनाइहरू ६० वर्षअघि अमेरिकाको एउटा अखबारलाई क्युबाका पूर्व राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोले दिएको अन्तरवार्ताको हो । क्यास्ट्रोको बारेमा मान्छेहरूका आफ्ना बिमतिहरू हुन सक्छन् किन्तु स्वाभिमान र देशभक्तिपूर्ण उनका अडानका अगाडि विरोधीहरू समेत नतमस्तक देखिन्छन् ।
अमेरिकाको हज्जारौं हज्जार कोशिसका बाबजुद अमेरिकाको नाकैमुनि सग्लो भएर बाँच्न सक्ने क्युबा धेरै अर्थमा अर्थपूर्ण छ तर हाम्रो देश अमेरिकाभन्दा धेरै टाढा छ । दासता र आत्मसमर्पणको मामिलामा भने हामी क्युबाभन्दा अमेरिकासँग निकै नजिक हुने दौडमा छौं । यही दौड हाम्रो दुर्गतिको नयाँ खेल बन्ने वाला छ ।
नेपालमा यतिबेला एमसीसी बहस चर्को बन्दैछ । यसभित्रको सघनताका बारेमा बहस नित्तान्त आवश्यक छ । आखिर यो के हो ? र यसले वर्तमान र भविष्यमा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू के कस्ता हुनेछन् भन्ने बारेमा सार्थक छलफल र निष्कर्षको माग गर्दछ । देश कुनै व्यक्तिविशेषको सनकका भरमा अगाडि जानु हुँदैन । होशियार हुन सकिएन भने यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले नेपाललाई अफगानिस्तान, इराक या सिरिया बनाउन सक्छ ।
जनता झुक्किए त अर्को निर्वाचनमा सच्चिने अवसर हुन्छ तर जब देश नै झुक्किन्छ सिंगो देश र भावी पुस्ताले दरार खेप्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले के कुरा प्रष्ट हुन जरूरी छ भने प्रचण्ड, बाबुराम, माधव, शेरबहादुर या ओलीभन्दा देश ठूलो हो । देशको अगाडि यिनीहरू एउटा भुसुना बराबर पनि होइनन् तर दुर्भाग्य यिनै भुसुनाहरूका कारण देशमा दुर्गन्ध फैलिएको छ ।
सरकामा हुँदा एउटा सरकारबाट बाहिर हुँदा अर्को बस् थुक्ने र चाट्नेको म्याराथौन दौड । सरकारमा हुँदा त्यही एमसीसी राम्रो सरकारबाट बाहिर निस्किदा त्यही एमसीसी खराब कसरी हुनसक्छ । यस मामलामा कमसेकम शेरबहादुर प्रष्ट छन् किनकि उनी समयको नाडी छाम्न सक्ने नेता नै होइन ।
आफ्ना खुट्टाहरू हेरौं, आफ्नो धरातल पहिचान गरौं । देशको आत्मगत र वस्तुगत अवस्था, अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको सम्भावित प्रयोगशाला हुन नदिन एमसीसी पारित होइन खारेज हुनुपर्छ !!!
रणनीति भनेकै पर्दापछाडिको खेल हो । एमसीसी सम्झौतामार्फत् नेपाल छिर्ने अमेरिकाको सहजै वहिर्गमन होला तर इतिहास भन्छ, यो आफैमा सकसपूर्ण छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए, “इरानमा हाम्रो धेरै लगानी छ फर्केर जान मिल्दैन ।” फरकफरक देशमा लगानीका सम्बन्धमा यस्तै भनाईहरू बुस तथा रेगनले पनि भनेका थिए । भोलि नेपालको सन्दर्भमा यही कुरा भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै प्रमुखता दिने कुरा स्वभाविक छ र हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कुटनीतिक सुझबुझ अपनाउनुपर्दछ । आजको विश्वमा कुटनीतिक सफलता या असफलतासँग देशको भविष्य गम्भीर रूपमा जोडिन पुग्दछ ।
देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नीति, नियम बनाऊ र त्यहीँ अनुरूप कर्म गर । दुई विशाल देशहरूका बीचमा अवस्थित हामीहरू अवसर र जोखिम दुवैको दोसाँधमा छौं । विशाल देशका आन्तरिक मामिलाहरूमा चोट पुग्नेगरी कुनै पनि कदम चाल्नु स्वयम् हाम्रा लागि आत्मघाती सावित हुन सक्छ ।
एमसिसीमा प्रवेश गर्नुअघि इरान, इराक, अफगानिस्तान, चिली लगायतका देशको इतिहास र वर्तमानको अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ सँगसँगै विन लादेन, सद्दाम हुसैन, सोमोजा, बाटिस्टा या सुहार्तो जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूको उत्थान र पतनको बारेमा जानकारी लिनु वाञ्छनीय हुन्छ । डलरका लागि देशको स्वाभिमान बेच्ने कठपुतलीहरू अन्ततः आफ्नै मालिकहरूबाट मारिएका छन् ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू ढाँटहरूको प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरू जस्ता देखिन्छन् । जनतालाई सम्पूर्ण रूपमा खुलस्त बताउने गरेको पाइदैन । हरेक सम्झौता पछाडिका खेलहरू केवल रहस्यमय र सत्ता स्वार्थका खेलहरूमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन् । एउटा तीतो सत्य के हो भने नेतृत्वलाई जनताप्रतिको विश्वास पटक्कै छैन यदि विश्वास हुन्थ्यो भने जनतालाई सत्य बताउने आँट हुन्थ्यो ।
अमेरिका र भारतको समान स्वार्थ चीन र नेपाल बीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको तहमा नजाउन् भन्ने छ । अमेरिका नेपालमा सम्पूर्ण रूपमा छिर्न चाहन्छ चाहे त्यो एमसीसी होस् या अरू कुनै माध्यममार्फत् । हेक्का राख्न के जरूरी छ भने अमेरिका केवल एउटा ढाड चाहन्छ जहाँ टेक्न सकियोस ।अमेरिकाको विदेशनीति निकै खतरनाक छ सियो भएर छिर्ने र हात्ती भएर बबण्डर मच्चाउने । कतिपयलाई आज यो चिन्तनको उग्रता पनि लाग्ला तर यो समयको अनिवार्यता हुनेछ ।
यस धर्तीमा अनेकन चोरहरू छन् जो अन्य राष्ट्रको सम्प्रभूतालाई कुल्चिने गर्दछन् तर आज आफ्नै पार्टी र देशमा ती चोरहरूका छिटाहरू सलबलाएका छन् । अमेरिकी ‘महाप्रभू’ ‘युरोपियन छोटेप्रभू’ तथा भारतीय कठपुतलीका लठैत अन्तरघाती र विश्वासघातीहरूलाई डलरको र्याल काड्नु परेको छ एमसीसीमार्फत् ।
निकारागुवाको घृणित युद्ध अनि हज्जारौंको ज्यान कसले लिएको थियो ? चिलीमा कत्लेआम अनि पिनोसेलाई धाप कसले मारेको थियो ? अर्जेन्टिनामा ३० हजार ब्यक्तिहरूलाई कसको इसारामा गायब पारिएको थियो ? पेरू, कोलम्बिया, बोलिभिया अर्थात् सिंगो ल्याटिन अमेरिकी महादेशमा लाखौं जनताको नरसंहारका लागि हतियार र निर्देशन कसले दिएको थियो ?
भियतनाम, कम्बोडिया र पूर्वी टिमोर, इराक, अफगानिस्तान अनि इन्डोनेशियामा निर्दोश जनतालाई कसले कसको इशारामा बम र बारुदले उडाएको थियो ? विश्वका कैयौं भागहरूमा निषेधित हतियार (Depleted Uranium Ammunition –DUA) अर्थात् यूरेनियमयुक्त हतियारहरु प्रयोग कसको इशारामा भैरहेको छ उत्तर सफाचट छ– अमेरिका र त्यसका पिछलग्गू सैन्य संगठन नेटो ।
यस्ता हज्जारौं उदाहरणहरु छन् जसले अमेरिकाको विदेशनीतिको वास्तविक चेहरा विश्व जनमत समक्ष देखिएको छ । अमेरिका आफ्नो देशको लागि लोकतान्त्रिक होला परन्तु त्यसको विदेशनीति भने गोमन सर्पभन्दा खतरनाक छ र त्यसैले अमेरिकासँग सहयोग लिनुभन्दा अगाडि हज्जारपटक सोच्नु बुद्धिमानी हुनेछ । आफ्ना खुट्टाहरू हेरौं अनि धरातल पहिचान गरौं । आजको गम्भीर भुलले भोलिको पुस्तालाई आफ्नै देशमा सास फेर्न कठिन नहोस्, आफ्नै देश आफ्नै सन्तानहरूका लागि गोलघर नबनोस् ।
आज व्रेनवाश गर्ने खेल हुँदैछ । औसत मानिसहरू दास बन्दैछन् । ब्रेनवाश गर्ने कलात्मक विधिमा पोख्त कथित बुद्धिजीवीहरू चतुरे तर्कहरू गर्दैछन् । जसले आफ्नै खुट्टाले टेक्ने सामथ्र्य राख्दैन बिहान के बोल्छ, दिउँसो र साँझ के बोल्छ तिनीहरूलाई जबरजस्त बुद्धिजीवीको पगरी गुथाइदैंछ । विस्तारै नकाब उत्रिदैछ, पटाक्षेप हुँदैछ । चोरहरूलाई महान् भन्दै दोसल्ला ओढाउने काम अब बन्द हुनुपर्छ । जब नेतृत्व बौलाइरहेको हुन्छ तब समाजमा आँधीको सम्भावना हुन्छ ।
इतिहास, समय, सन्देश, संकट सम्भावना र विज्ञानका साथ जो इमान्दारीपूर्वक खडा हुन सक्छ त्यसले मात्रै अबको नेतृत्व गर्न सक्छ । उमेरले युवा देखिए पनि मानसिक र वैचारिक रूपमा प्रष्ट हुन नसक्नेहरूको अल्पायुमैं मृत्यु हुन्छ ।
अमेरिकी “महाप्रभू”भन्दा खतरनाक नेपाली गोमन सर्पहरू छन् जसको टाउकोमा ढिलो या चाँडो प्रहार जरूरी छ यो चिन्तनको उग्रता होइन समयको अनिवार्यता हो ! चेतना भया !